Ithangi langaphakathi negobolondo langaphandle leDewar zenziwe ngensimbi engagqwali, kanti nohlelo lwangaphakathi lwethangi lwenziwe ngensimbi engagqwali ukwenza ngcono amandla futhi kunciphise ukulahleka kokushisa. Kukhona ungqimba lokufaka okushisayo phakathi kwethangi langaphakathi negobolondo elingaphandle. Izinto zokwehlukanisa ezishisayo eziningi kanye ne-vacuum ephezulu kuqinisekisa isikhathi sokugcina samanzi. I-vaporizer eyakhelwe ngaphakathi ihlelwe ngaphakathi kwegobolondo ukuze iguqule uketshezi lwe-cryogenic lube igesi, futhi i-supercharger eyakhelwe ngaphakathi ingakhuphula ingcindezi ibe ingcindezi enqunywe kusengaphambili futhi iyigcine izinzile ngesikhathi sokusetshenziswa, ifezekisa inhloso yokusebenzisa ngokushesha nangokuqinile. Isilinda segesi ngayinye efakwe ngumoya inesakhiwo sensimbi engagqwali (iringi yokuvikela) ukuvikela ipayipi. Iringi evikelayo ixhunywe kwisilinda esinabakaki abane, futhi ubakaki ngamunye uboshelwe ukwenza kube lula ukusetshenziswa kwezinqola kanye nama-cranes ukuthwala isilinda segesi. Zonke izingxenye zokusebenza zibekwa ngaphezulu kwesilinda segesi ukuze zisebenze kalula. Endaweni ezimele yokusetshenziswa, umsebenzisi angakwazi ukulawula ngempumelelo inqubo yokusebenzisa nge-valve yokukhipha, i-booster valve, i-gauge yengcindezi, i-valve yesigaba se-liquid, njll. Ukuze kuqinisekiswe ukuthi i-liner yangaphakathi yesilinda segesi ingaphansi kwengcindezi yezokuphepha, kufakwa i-valve yokuphepha kanye ne-disk rupture ku-cylinder yegesi.
Isetshenziselwa ukuhambisa nokugcina uketshezi lwe-cryogenic njenge-liquid oxygen, i-nitrogen ewuketshezi, i-liquid argon, i-liquid carbon dioxide, i-LNG, njll. Isilinda segesi singasetshenziswa ukuphakela igesi ewuketshezi noma enomoya. Isilinda segesi kulula ukusisebenzisa, siphephile futhi sithembekile, siyonga futhi siqinile. Izici ezithile zimi kanje: 1. Uhlelo lokusekela lwethangi langaphakathi lwenziwe ngensimbi engagqwali ukufeza inhloso yokulahlekelwa ukushisa okuphansi namandla amakhulu. 2. Kulula ukuyisebenzisa futhi ingaqhutshwa ngokuzimela ngumuntu oyedwa. 3. Gcina i-cryogenic liquid emsulwa. Umthamo omkhulu wesitoreji. Umthamo wokugcina igesi we-DP175 dewar cylinder ulingana nezikhathi ezingaphezu kwezingu-18 umthamo wokugcina igesi wesilinda esezingeni eliphakeme. 4. Ingcindezi yangaphakathi yesilinda segesi izokhuphuka phakathi nesikhathi sokucishwa ngemuva kokugcwaliswa. Isilinda segesi sinohlelo lokuvikela ukusebenza oluphezulu, futhi izinga lokunyuka kwalo kwengcindezi liphansi. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, asikho isidingo sokunciphisa ingcindezi nge-valve yokuphepha. 5. I-supercharger ne-vaporizer eyakhelwe ngaphakathi ingabona ukutholakala okuqhubekayo kwegesi noma uketshezi, futhi asikho isidingo sokufaka i-vaporizer yangaphandle ngaphansi komthamo owenzelwe.
Langaphambilini Liquid Oxygen eyisilinda
Amathangi we-Lng Bullet
I-Lng Cargo Tank
I-Lng Crankgenic Tank
Uhlobo lwe-Lng Tank